Ikwu Oru Agugu Sayensi Na Afrịka Site Na Nnweta Ihere - AfricArXiv
Nye onyinye na AfricaArXiv
site na OSF
site na ScienceOpen
n’ebe Onye na-ahụ maka Sayensị Sayensị Na-ahụ Maka Ọrịa
Q&A gbara gburugburu COVID-19 n'asụsụ Africa
Nchịkọta ScienceOpen na 'COVID-19' na 'Africa' (ext. Url)
Ikwu Oru Sayensi Na Afrika Site Na Nweta Ihere
bipụtara Johanssen Obanda & Abdullahi Tsanni on 8th July 2020 8th July 2020
Open ohere (OA) bụ usoro nke ụkpụrụ na ọtụtụ omume nke esite na-ekesa nsonaazụ nyocha n'ịntanetị, na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ihe mgbochi ịnweta ohere ndị ọzọ. AfricanArXiv na African Science Literacy Network (ASLN) na-agbakọ aka ọnụ iji kwalite nnyefe nke isiokwu na AfricanArXiv na ntụgharị nke isiokwu ahụ iji mee ka ha nweta ọhaneze obodo ndị obodo Africa.
Ntọala na June 2018, AfricaArXiv na-eje ozi dị ka ebe nkwakọ ngwaahịa maka nsonaazụ agụmakwụkwọ sitere na ndị ọkà mmụta sayensị Africa yana ndị ọkà mmụta sayensị na-abụghị ndị Africa nke na-arụ ọrụ na isiokwu Africa. AfricArXiv raara onwe ya nye ime ngwangwa na imepe nchọpụta na imekọ ihe n’etiti ndị ọkà mmụta sayensị Africa ma na-enye aka iwulite ọdịnihu nkwukọrịta agụmakwụkwọ.
Foto: Network Science Litewana Network
Netiwọki na Afrika (ASLN) bu mmekorita nke di n’etiti ndi sayensi na ndi nta akuko, nke emere n’October 2019 na Nigeria site na TREND na Africa, ịkwado nkwuputa sayensị kachasị mma na ọha na eze. ASLN na-arụ ọrụ iji bulie ozi banyere mkpa sayensị dị na ndụ anyị, ọha mmadụ na ọdịnihu ya, na-ewepụ echiche na-ezighi ezi nke sayensị ma bulie profaịlụ nke nyocha Africa. Ọrụ a na-enyere aka igbochi ọdịiche dị n'etiti sayensị, ọha na iwu, nke anyị kwenyere na ọ ga-enyere aka mee ka ịrị elu Africa dị ka ikike sayensị. Ebumnuche kachasị nke nyocha sayensị kwesịrị ịbụ ihe metụtara ọha mmadụ. Agbanyeghị, nyocha a na-ebipụtakarị na-akwụ ụgwọ maka ụgwọ ịkwụ ụgwọ, n'ihi nke a, na-egbochi mmetụta nchoputa na ọha mmadụ. Site na mmekorita a, anyi nwere olile anya na ikwalite ohere nchoputa sitere n’Afrika na site n’aka ndi oru nta akuko, bulite omuma banyere nkpa nke nyocha ndi a n’ebe ndi Ohaneze na ndi nwere nsogbu di.
Agụmakwụkwọ sayensị enwere ike ịkọwa ya n'ụzọ dị iche iche. Otu n’ime nkọwa ndị ahụ ga-abụ: oke ụdị amamihe na ikike dị mkpa ka etolite iji chọpụta, ịghọta, inyocha na iji ozi, gụnyere ikike ịghọta echiche sayensị na ọdịnaya (Muir, J, (2016) Gịnị bụ agụmakwụkwọ sayensị?). Ọ dị mkpa ịghọta ọrụ nke ịkekọrịta ihe ọmụma obodo na itinye aka ọha na eze n'ịkwadebe ndị mmadụ n'otu n'otu na obodo dị na mba Africa. Ọtụtụ ihe ndị mba ụwa na-ejikarị Bekee, Arabik ma ọ bụ French. Agbanyeghị, mbọ agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ site na iji ọnụ ekwu okwu, ederede dị mfe, ịse asụsụ obodo nwere oke itinye aka na ntinye aka na mmetụta. Ya mere, iji asusu obodo emegodi ihe ekwesighi idobe ya.
Ohere dị iche iche maka mmụta na ndụ niile na ntọala adịghị. N'iburu n'uche etiti sayensị na teknụzụ na-abawanye na ọha mmadụ nke oge a, agụmakwụkwọ kwesịrị ịkwadebe ọtụtụ mmadụ ka ha gụọ akwụkwọ sayensị mana maka ndị na-eritebeghị uru na nke a ruo ugbu a, ajụjụ bụ ka a ga-esi jupụta oghere ihe ọmụma ahụ? O kwere omume iche n’uche inye ndi okenye ezi igbe ‘ihe nnabata’ nke ihe omuma banyere imuta sayensi na teknụzụ? O yikarịrị ka ọ ga-aga nke ọma ma ọ bụrụ na agbalịala metụtara ihe ụfọdụ akọwapụtara dabara na ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị na mpaghara ha. Na Desirably, agụmakwụkwọ sayensị, na nhazi ma na-atọghị ụtọ, nwere ike ịme onyinye dị ukwuu na nghọta nghọta nke sayensị na ịkwalite agụmakwụkwọ sayensị.
AfricanArXiv na-arụ ọrụ n'ịkpalite nyocha dị n'etiti kọntinenti yana ụlọ ọrụ nyocha nọ na mba ofesi site na ime ka ụlọ ọrụ nyocha nke Africa nwee ike ịgụta akwụkwọ. Enwekwu uru nke ihe ndebanye aha maka Africa gụnyere ịhụ ọhụụ maka ihe nyocha Africa, ime ka mmekorita na-agafe na kọntinenti, na ohere ịkekọrịta nsonaazụ nyocha n'asụsụ Africa.
“TREND na Africa nwere obi uto isonye na AfricaArXiv na ASLN iji kwado ma bulie nkwukọrịta sayensị na sayensị mepere emepe. Sayensị ọha na-akwụ ụgwọ na-eme ka mmadụ mara ihe dịịrị mmadụ niile. Gbalịsie ike na ndị na-ahụ maka sayensị na-akpọtụrụ ndị na-eme nchọpụta na-ebipụta akwụkwọ na-emeghe ma na-emeghe ohere iji hụ na ọha mmadụ maara nke ọma banyere ihe ndị sayensị na-eme! Ọ dị ugbu a karịa mgbe ọ bụla anyị kwesịrị ijide n'aka na a na-agbasaara mmadụ niile ozi ohere ịmara ma chebe onwe ha. ” Samyra, Onye Isi Nchịkọba General TReND
Ihe ị ga - eme
Dị ka ọkà mmụta sayensị, nyefee akwụkwọ ndebanye ihe gị na usoro atọ ndị ọzọ anyị na-arụ ọrụ na https://info.africarxiv.org/submit/
Biko gụakwa akwụkwọ ntuziaka na-edo onwe anyị n'okpuru: https://info.africarxiv.org/before-you-submit/
O buru na i nwere mmasi banyere iji asusu asusu ndi Africa n’ime Sayensi, I gha ewepu onwe gi ka itughari bekee na nzukota nke ihe odide ndi anakpo ndi AfricaArXiv.
Open Access: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
Mmụta sayensị https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literacy
Muir J, (2016) Gịnị bụ agụmakwụkwọ sayensị? - https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eportfoliojm/2016/02/22/what-is-science-literacy/
(onye edemede / 2017) Ngụgụ Sayensị na Mba Ndị Na-emepe emepe: Nyocha Ala Mgbapụta: - Nchịkọta Nchịkọta, http://www.nida-net.org/documents/8/SL_Researcht_Report_Final.pdf
Categories:	Njikọ AkaDdị AsụsụOpen AccessMepee Sayensi
Kedu ihe dị n'uche gị?
Categories Họrọ Atiya Ike ikike (1) Imekota (12) AKOVKỌ-19 (30) Ihe omume (3) General (10) Akụrụngwa (1) Agwa Asusu (1) Languagedị Asụsụ (4) Mepee Mepee (22) Mepee Sayensi (13) Nyochaa Ọgbọ (3) Mbido (7) Na-ekwusara (11) Nkwukọrịta sayensị (15) Nrubeisi (5)
Akwukwo nri nke umuaka nke Africa AfricanResearch ASAPbio Berlin BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Center maka Open Science nkata ogbako Covid-19 Crastina DialogShift Nchọpụta Edinburgh Nchekwa nri IHECE11 IHECE2019 IGDORE Joy Owango asụsụ asụsụ dịgasị iche ụzọ Mahadum Omdurman Islamic imeghe Akwụkwọ Mepee oghere Mepee Ihe Ọmụma emeghe sayensị Emepe Science Conference osc2018 mmekorita Pearl Ihuoma Osirike Nyocha ndị ọgbọ akwusila PREreview ebipụta PubPub nyochaa ngwa ngwa Ntughari Nkwukọrịta Sayensị ScienceOpen sayensị mmadụ Sudan Ebumnuche ndị nwere ike ịzụlite TCC Africa ubushakashatsi
AfricArXiv na Twitter
Ingnweta Ozi Nchọpụta n'Africa
N'ime usoro blog Science Digital na nyocha metụtara SDG, onye otu anyị na-ahụ maka ndụmọdụ Joy Owango dere banyere SDG 4, Mmụta Ogo.
AfricArXiv tụgharịrị 2
Anyị ji obi ụtọ mee ememme ncheta afọ nke abụọ nke AfricaArXiv na June 2. AfricaArXiv tụgharịrị afọ abụọ nke ọrụ dị ka akwụkwọ ndebiri maka ọrụ nyocha na isi okwu Africa site n'aka ndị Africa na ndị na-abụghị ndị Africa. Ọ bụ GỤKWUO…
Ndụ Ndị Na-adịghị Ndụ
Anyị kwụ ọtọ na nkwado n’etiti ndị isi ojii na United States of America - #BlackLivesMatter AfricArXiv dị adị iji lebara ụlọ ọrụ na aka ịma aka na agam n’ihu nke usoro agụmakwụkwọ iji nye ndị Africa GỤKWUO…
Afọ AfricanArXiv na-agbatị
AfrikArXiv ọdịnaya CC BY 4.0 nyere ikike
Weebụsaịtị a na-eji kuki iji melite ahụmịhe gị. Anyị ga-eche na ịnabata iwu a ọ bụrụhaala na ị na-eji weebụsaịtị a X NabataIwu Nlele
Nullam accumsan sed dapibus suscipit libero tristique efficitur. amet, tempus